हस्तकला व्यवसाय नेपालको एउटा पहिचान र गौरवको विषय हो । अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्र मै नेपालले हस्तकलामा आफ्नो छुट्टै स्थान बनाउन सफल भएको छ नेपालमा विभिन्न प्रकारका हस्तकला व्यवसायहरू छन्, ती मध्य थान्का व्यवसाय बजारमा चलेको एक हस्तकला व्यवसाय हो ।
"राम्रो थान्का बेच्न सकेमा २ लाख देखि १० लाख सम्म पनि एउटै थान्काबाट कमाउन सकिन्छ भने कहिले व्यापार शून्य नै हुन्छ ।"
हाल नेपालमा थुप्रै थान्का व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू भेटिन्छन् । उद्यमी नेपालको टिमले पनि यस्तै व्यवसाय गर्दै बसेका एक उद्यमीसँग एउटा सानो कुराकानी गरेको छ । विजय राना ललितपुरको इमाडोलमा बस्छन् । उनको थान्का पसल भने पाटन, क्वल्खुमा छ । उनीसंग भएको कुराकानीको स्वरूप तल पढ्नुहोस:-
१.तपाईँलाई यो व्यवसाय सुरु गर्ने विचार कसरी आयो?
२. यो व्यवसाय सुरुगर्दा कति लगानी गर्नु भयो ?
अन्त्यमा, थान्काको बारेमा राम्रो ज्ञान र अनुभव भयो भने जो सुकैले पनि यो व्यवसायमा लाग्न सक्ने विजय रानाको सुझाव छ । यदी तपाईँलाई पनि यस्तै व्यवसाय गर्ने इच्छा छ भने तपाईँले पनि थोरै लगानीमा यो व्यवसाय थालनी गर्न सक्नु हुन्छ किनभने थान्का व्यवसायको माग नेपालमा मात्र नभएर विदेशी मुलुकमा पनि उत्तिकै छ । त्यसैले आफूले केही फरक तरिकाले यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्यो भने धेरै फाइदा देखिन्छ ।